Umboniso weAmazon Echo, uphononongo: Isithethi esikhulu kunye nescreen esikhulu esine-Alexa | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | elektroniki, Reviews
Siyaqhubeka nokuhlalutya iimveliso eziyilelwe ukufumana uninzi lwabancedisi ababonakalayo kunye ne-intanethi yezinto. Amakhaya ethu aya esiba nombulelo ngobukrelekrele kwezi mveliso zinemfashini ngakumbi kunangaphambili, hlala nathi ukuba ufuna ukwazi yonke into iAmazon Echo Show ekwaziyo ukuyinika abasebenzisi. Maninzi amacandelo asothusileyo kunye namanye asiphoxileyo, uyafuna ukwazi?
Njengesiqhelo, sikushiya entlokweni yeli nqaku ividiyo oza kuyibona ngeenkcukacha zonke izinto esikuxelela zona apha, kwaye sicebisa ukuba undwendwele ukuba ufuna ukubona ukuba le 10,1-intshi yesikrini isebenza njani akhawunti iAmazon Echo Show. Enye yamandla ayo ngokuchanekileyo ngumgangatho kunye namandla esandi, Into oya kuthi nayo ukwazi ukuyijonga kwividiyo. Ngaphandle kokulibaziseka okunye siza kuthetha ngomxholo wale Amazon Echo Show ukuze ulinganise ukuthenga kwakho. Siyakushiya eli khonkco kwimeko yokuba ufuna ukujonga ngokuthe ngqo kwiAmazon.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Tune kunye nolunye uluhlu lwe-Echo
2 Iimpawu ngokubanzi: Isikrini esikhulu kunye nokungabikho okukhulu
3 Umgangatho womsindo, umthetho olandelwayo weZigbee kunye nekhamera edityanisiweyo
Uyilo kunye nezixhobo: Tune kunye nolunye uluhlu lwe-Echo
IAmazon isebenzise izixhobo ezifanayo ngokukuko komboniso weEcho njengakwezinye izixhobo enazo. Sifumana ukuveliswa okungafaniyo ngeplastiki emhlophe okanye emnyama, kuxhomekeke kumbala okhethiweyo. Icandelo elingaphambili liphelele kwiscreen se-intshi eyi-10,1, ngelixa kwi-bezel ephezulu siza kufumana iimpazamo zemakrofoni ezine Kwaye amaqhosha amathathu kuphela: Ulawulo lwevolumu + kunye -, kunye neqhosha lokuyithulisa imakrofoni, oku kulandelayo kukhanya ngombala obomvu ukubonisa ukuba uthulisiwe, asifumani kukhanya ngakumbi kwe-LED ngaphandle kwaleyo ifakiwe kwiscreen.
Ngasemva - Somlomo
Ubungakanani: X x 246 174 107 mm
Ubunzima: 1,75 Kg
Icandelo elingaphambili linezakhelo ezibalulekileyo, kodwa akukho nto ibambekayo, ngelixa sifumana eminye imingxunya eminye imibhobho emine (iyonke isibhozo) kunye nekhamera yangaphambili eya kusetyenziselwa iinkomfa zevidiyo. Emuva sinezithethi ezifihlwe ngasemva kwelaphu leyiloni elihamba nombala wesixhobo esisifumeneyo, ukuphela koxande kunye namazibuko oxhulumaniso, kule meko kuphela yi-microUSB kunye ne-AC / DC port eyinika amandla. Ezantsi sinesiciko serabha esitshintshisanayo esigcina isixhobo sikwindawo ngaphandle kwengxaki.
Iimpawu ngokubanzi: Isikrini esikhulu kunye nokungabikho okukhulu
Siqala ngesikrini, akunakwenzeka ukuba ungayikhathaleli loo nto Iphaneli "enkulu" eyi-intshi engu-10,1, isebenzisa itekhnoloji ye-IPS LCD ukusinika ukukhanya okungaphezulu ngokwaneleyo ngaphakathi endlwini, Nangona kunjalo, sifumene ukukhanyisa okukhanyisa kakhulu kwiithoni ezimnyama, ezo zihamba phambili kunxibelelwano lomsebenzisi. Igqunywe ngeglasi, ibinokuba yintoni enye into, kwangaxeshanye inetekhnoloji ye-capacitive, njengoko kwenzekile kwiAmazon Echo Spot esebenzisana nescreen kulula kwaye njani. Nangona kunjalo, Ndaphoxeka kwinto yokuba ayibonakali ngathi ine-anti-fingerprint, Kuyacaca ukuba kuba idityaniswe nefenitshala kulindeleke ukuba icocwe rhoqo, kodwa umnini uyacaca ukuba isikrini sigcwele iminwe, into eya kuthi inyuke ngokungathandabuzekiyo ukuba incinci yendlu iyasebenzisana nayo.
Ubungakanani besikrini: I-LCD ye-intshi eyi-intshi eyi-10,1 isisombululo seHD (iiphikseli eziyi-1.280 x 800)
Inkqubo: Intel Atom x5-Z8350 (1,44 GHz ezinzile)
Ukuxhuma: I-Bluetooth kunye ne-Dual-band 802.11ac WiFi
Iidomoti: Te knoloji Zigbee
Amandla ekrwada asezandleni ze-Intel, engaqhelekanga kolu hlobo lwesixhobo. Asifumananga kulibaziseka, enyanisweni akukho nto isenza sicinge ukuba amandla ayasilela, nangona kucacile ukuba isixhobo sinqunyelwe kwimisebenzi ethile kwaye ayenzelwanga kwaphela ukwenza naluphi na uhlobo lomxholo. Andifumananga naliphi na icandelo apho ndiphose khona amandla ngakumbi, ngaphandle kwento yokuba Iscreen sinokufumana ubuncinci isisombululo esipheleleyo se-HD sithathela ingqalelo ukuba sisixhobo esi esiya "kukhanya" ngokukhanya kwaso kumhombiso wethu.
Kwinqanaba lokudityaniswa sixhunyiwe Ibhendi yeWifi (2,4 GHz kunye ne5 GHz) Into esinokubulela ngayo kula maxesha apho sinomnatha ongenazingcingo "osele". Unxibelelwano Bluetooth bubungqina kwaye bujolise ekunxibelelaneni naluphi na uhlobo lwesithethi. Si I-FireOS njengenkqubo yokusebenzaSele siyazi ukuba luhlobo oluguqulweyo lwe-Android eyilelwe ukwenza iimveliso zeAmazon zahluke kangangoko. Sifumene ii-microphone ezisibhozo ezinokurhoxiswa kwengxolo ukuba baya kusimamela ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na imeko kwaye banike impendulo entle. Ngokubhekisele kwizithethi nakwiikhamera, siya kunika iinkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi, kwaye bafanele icandelo labo.
Umgangatho womsindo, umthetho olandelwayo weZigbee kunye nekhamera edityanisiweyo
Inefayile ye- Ikhamera ye-5 MP, ngaphezulu ngokwaneleyo kwinkomfa, kodwa ukuba kufuneka silibale ngokusebenzisa kwimeko apho sifuna ukuthatha imifanekiso, iziphumo yinto efana nokubuyela ku-2009. Nangona kunjalo, enye indawo apho le Amazon Echo Show ikhanya ngokuchanekileyo yinto yokuba Inobuchwepheshe beZigbee, oku kuthetha ukuba siya kuba nakho ukusebenzisa esi sixhobo njengeziko lokufikelela Kwaye ulibale malunga neebhulorho ezineemveliso zikaPhilips kunye neKEA.
Ikhamera: 5 MP
Izithethi: 2.0, 2 stereo enemagnethi ye-neodymium kunye nerediyetha yebass
Ngoku sithetha ngezithethi, ezakhiwe zizithethi ezibini ezi-intshi ezimbini ezinemagnethi ye-neodymium
kunye nerass radiator. Inqaku elishiye eyona incasa imnandi emlonyeni wam, ke ndiyangqina ukuba inokuba kuphela kwenkqubo yeaudio nakweliphi na igumbiIthekhnoloji yeDolby kwaye inika isandi esikumgangatho ophezulu kakhulu esingabonakalisi naluphi na uhlobo lokusilela nakweyona mandla ayo aphezulu. Ewe inika i-bass engakholelekiyo, ulumke kakhulu ngendawo osibeka kuyo esi sithethi sikhulu. Inyaniso yokuba inobunzima obungaka isinika umqondiso ocacileyo wento esiza kuyifumana kweli candelo.
Uyilo oluncinci kwaye luyathandeka kumhombiso
Isandi esikumgangatho ophezulu, ngaphezu kokuba kulindelwe
Ixabiso eliphantsi kunalo lonke ukhuphiswano
Isikrini esikhulu kunye nomsebenzisi olungileyo
Amanqaku amaninzi ashiyekileyo
Ekugqibeleni sifumana imveliso onokuyithenga kwi-229,99 ye-euro kule LINK ngemibala emibini, emnyama nomhlophe. Ukuthathela ingqalelo umahluko kwixabiso kunye neAmazon Echo Plus kunye nokwazi ukuba kuyavakala ngcono, kuhamba nescreen, kunzima kuthi ukuba singayicebisi. Ngaphandle kwamathandabuzo mhlawumbi ayisisixhobo esifanelekileyo ukwenza indlela yokuqala kuluhlu lwe-Echo, kodwa lolona lugqibeleleyo kwaye luya kuba sisiseko sonxibelelwano lwethu xa luyinxalenye yekhaya lethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Umboniso weAmazon Echo, uhlalutyo: Isithethi esikhulu kunye nescreen esikhulu esine-Alexa
IVodafone TV iza kwi-Samsung Smart TV, uyifaka njani